एक पुरुषका दुई श्रीमती, किन गरे दोश्रो बिवाह ? थाहा पाए अचम्म लाग्छ ! – Khabar Silo
एजेन्सी- मानिसहरु घरमा श्रीमती भएर पनि बाह्य सम्बन्धमा हुन्छन्। यसले परिवारलाई भाड्ने काम गर्दछ । बाह्य महिलासँग श्रीमानको सम्बन्धबारे थाहा पाउँदा श्रीमतीहरु रिसाउँछन्। सामाजिक रुपमा यस कार्य स्वीकार्यसमेत छैन । तर, थाइल्यान्डकी ३२ वर्षीया वारिसारा पोक्रिचान आफ्ना श्रीमानका कान्छी श्रीमतीसँग मिलेर बसेकी छन्। उनीहरु दुवै साथीजस्तै छन् । ४२ वर्षीय मानोप नुटायोथिनले १० वर्ष अगाडि पोक्रिचानलाई दोस्रो श्रीमतीको रुपमा विवाह गरेका थिए। मानोपको पहिलो श्रीमतीको निधन भएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस : बदला लिनका लागि ६१ वर्षका वृद्धले चोरे १५९ साइकल सिट, पुलिससमेत चकित
जापानको टोकियोमा ६१ वर्षका एक वृद्धलाई साइकलका १५९ सिट चोरीको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । आरोपीको नाम आकियो हतोडी हो । उनले १५९ वटा साइकलको सिट यसकारण चोरेका थिए किनभने उनको साइकलको सिट चोरी भएको थियो । शहरमा थुप्रै दिनदेखि लगातार साइकलको सिट चोरीको घटना बढिरहेको थियो । पुलिस थुप्रै दिनदेखि चोरीको बढ्दो मामलाका कारण तनावमा थिए ।
घरमा भेटिए १५९ सिटः ओकियोले पहिलो पटक अगस्टमा साइकलको सिट चोरेका थिए । जुन व्यक्तिको सिट ओकियोले चोरेका थिए ती व्यक्तिले पुलिसलाई यसबारे उजुरी दिएका थिए । पुलिसले जब अनुसन्धान सुरु गरे तब सिसिटिभी क्यामरामा आकियोले चोरी गरिरहेको स्पष्ट देखिएका थिए । उनले निकै सावधानीपूर्वक साइकलको सिट निकालेर आफ्नो बास्केटमा राखेको देखिएका थिए । त्यसपछि उनी पुलिस रडारमा आएका थिए ।
पुलिसले आकियोलाई पक्राउ गरेपछि उनको घरमा छापा मार्दा दंग भए । उनको घरबाट १५९ साइकल सिट बरामद गरियो ।पुलिसलाई दिइएको बयानमा आकियोले भने, ‘सन् २०१८ मा मेरो साइकलको सिट चोरी भएको थियो । जसका कारण मैले ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मैले आफूले जस्तो समस्या भोगेँ त्यही समस्या अरुले पनि भोगुन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरेको हुँ । त्यसकारण मैले पुलिसलाई यसबारे जानकारी दिनुको साटो चोरी गर्न सुरु गरेँ ।’
आखिर किन गर्दैछिन पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी पतिसँग स म्बन्ध वि च्छेद
काठमान्डौ , पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र जिपी तिमल्सिनाको वैवाहिक स म्बन्ध सं कटमा परेको छ। एक समय अ न्तर्जातिय विवाह गर्ने रो ल मोडल बनेका यी दुबैको घर झ गडा ब ढ्दै जाँदा आ आफ्नो बाटो ला ग्ने त यारीमा लागेको खबर आजको शुक्रबारले छापेको छ। दुई सन्तानका अ भिभावक रहेका उनीहरुबीच स […]
‘कमब्याक’पछि किन नेपाली फिल्म नै बनाए विराजले ?
काठमाडौं – अभिनेता विराज भट्टले लामो समय नेपाली फिल्म उद्योगमा राज गरे । उनका फिल्म हेर्न दर्शक ब्ल्याकमा टिकट काटेर हल छिर्थे । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । फिल्म क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको उदय भइसकेको छ । यतिबेला भने विराज आफैले निर्माण गरेको फिल्मका कारण चर्चामा छन् । झण्डै २ वर्षको मेहनतपछि विराज ‘साङ्लो’ चलचित्र […]
ट्रोलमा प्रियंका चोपडा
काठमाडौं (एजेन्सी) – बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार भएकी छन्। अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित ६२ औं संस्करणको ग्रामी अवार्डमा सहभागि भएलगत्तै उनले लगाएको पहिरनका कारण ट्रोलको सिकार भएकी हुन्। समारोहमा सहभागी भएकी उनले लगाएको सेतो गाउनका कारण उनको आलोचना भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फेसन ब्रान्ड राल्फ एन्ड रुसोले तयार गरेको नेकलाइनसहितको चम्किलो गाउन […]
यी हुन् अत्याधिक रक्सी पिएर हस्पिटलमा भर्ना समेत भएका बलिउड कलाकारहरु
कतारमा दुई वर्षदेखि नाकाबन्दी, तर ‘खासै असर परेको छैन’ आखिर किन ?
छोराको बिहेमा जन्ती गएका बाबुले सम्धिनी (बेहुलीकी आमा) भगाएपछि..